Ibanga ukusuka eMhlabeni kuya enyangeni. Yazi zonke izimfihlo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Lapho sibheka isathelayithi leplanethi yethu, kubonakala kuwe ukuthi isondele kakhulu kunalokho eliyikho ngempela. Futhi ingabe leyo ibanga ukusuka emhlabeni kuya enyangeni kuyinto esekuzanywe ukukalwa iminyaka eminingi ukuthola umqondo wokuthi iyini ngempela indawo yonke. Ukuthola umbono webanga eliphakathi kweplanethi yethu nesathelayithi yayo, sizosebenzisa ezinye zezithombe nezincazelo ukwenza kube lula ukuqondakala.
Kule ndatshana sizokukhombisa ukuthi yini ibanga ukusuka eMhlabeni kuye enyangeni nokuthi ungakubala kanjani.
1 Ibanga ukusuka eMhlabeni kuye enyangeni
2 Umsuka wezibalo zebanga ukusuka eMhlabeni kuye enyangeni
3 Ukuhambela inyanga
Ibanga ukusuka eMhlabeni kuye enyangeni
Impela sekukaningi sizwa ngebanga eliphakathi kweplanethi yethu nesathelayithi yayo ngamanani. Ngokuqondile kunamakhilomitha angama-384.403 ebanga. Njengoba bekulindelekile, leli banga liyinto engaqondakali kumuntu, ngoba asijwayele ukuhamba la mabanga. Le nombolo iphindwe kaningi kangangokuthi kufana nokuthi ilahlekelwe ingqikithi yayo nencazelo yayo.
Kubonakala kuyisimo esingalungile futhi akuvezi noma iyiphi idatha ekhethekile. Uma sifunda lesi sibalo singacabanga ukuthi yibanga elide lapho isihlukanisa khona. Noma kunjalo, ubuchopho bethu abukwazi ukuqonda ubukhulu baleli banga. Njengoba sijwayele ukubona inyanga isemhlabeni futhi ibonakala ngathi inkulu impela kithina, kungasenza sibonakale ukuthi isondele kakhulu kunalokho eyiyo.
Ukuqonda okuncane mayelana nebanga kufanele sibheke esithombeni sokuqala salesi sihlokwana ukubona isikali sangempela ngokwengeziwe. Lapho sibona isithombe singahlaziya inkinga yokulinganisa leli banga lomuntu.
Umsuka wezibalo zebanga ukusuka eMhlabeni kuye enyangeni
Kubalwa okokuqala ibanga phakathi kweplanethi nesathelayithi kwakungu-150 BC nguHipparchus. Ukuze kubalwe leli banga, kwakususelwa ekunciphiseni kwethunzi iplanethi yethu eliyiphonsa enyangeni ngesikhathi ukusitheka kwenyanga. Ngaleso sikhathi, leli banga belingalungile ngokuphelele, ngoba isibalo samakhilomitha angama-348.000 sitholiwe. Kuyadingeka ukukwazisa ukufaneleka kukaHipparchus kusukela lapho ngobuchwepheshe obuncane obabutholakala ngaleso sikhathi, kwaba nephutha elingaphansi kuka-10% webanga langempela phakathi kwalezi zindikimba ezimbili zasezulwini.
Ngenxa yobuchwepheshe esinabo namuhla singalibala ngokunembile leli banga. Ukwenza lokhu, isikhathi esithatha ukukhanya ukuhamba siyalinganiswa kusukela eziteshini ze-LIDAR eMhlabeni kuya ekubuyiseleni emuva okhetho obekwe enyangeni. Noma kunjalo, ibanga liyisibalo esikhulu kangangokuba kunzima ukusifaka ezingqondweni zethu.
Ukusinikeza umbono, phakathi kwebanga ukusuka eMhlabeni kuya enyangeni wonke amaplanethi we uhlelo lwelanga. Ngalokhu kuqhathanisa kuyabonakala ukuthi kukhona impela ibanga elide. Amaplanethi amakhulu afana I-Jupiter y Saturn azinkulu ngokwanele ukuthi ubukhulu bazo bukhulu kunebanga eliphakathi kwalezi zindikimba ezimbili zezulu.
Ngalo mfanekiso omuhle ngokwanele ukuze umuntu akwazi ukushintsha ngokuphelele umbono esinawo webanga eliphakathi kwenyanga noMhlaba. Ngokwenziwa kwaleli banga singakwazi futhi baqonde kangcono amandla adonsela phansi afakwa yiplanethi yethu lapho ingubukhulu bayo. Esinye isici esibalulekile ukuhlola ukuthi ngabe umuntu ukwazile ngempela ukufinyelela enyangeni noma cha.
Ukuthola umbono webanga elikhulu phakathi kwalezi zindikimba ezimbili zasezulwini, sizokhipha into ejwayelekile phakathi kwethu. Sizolingisa uhambo olusuka eMhlabeni luye enyangeni ngemoto. Okuncane noma okuncane ungahamba ngokwesilinganiso ku-120 km / h emotweni ukuze singahlawuliswa ijubane.
Uma sinquma ukuhamba ngemoto siye enyangeni, kungasithatha cishe izinyanga ezinhlanu ukufika lapho. Hlala wazi ukuthi lezi zinyanga ezinhlanu zazizokwenzeka uma kuphela singazange sime kanye phakathi nohambo lonke.
Kuphakathi kokuchofoza olunye uhambo olude kakhulu njengenkanyezi esiseduzane esinayo, singakuthatha ngaphezulu kweminyaka emi-4 ngihambela lapho. Kungcono singakhulumi nokuvakashela umthala wethu oseduze obizwa nge-Andromeda. Lo mthala ungaphezu kweminyaka eyizigidi ezi-2 zokukhanya kusuka kithi, ngakho-ke kungcono ukungacabangi ukuthi kungathatha isikhathi esingakanani uma sifuna ukuhamba ngemoto.
Njengoba ukwazi ukubona, kusukela ekukhulumeni kakhulu ngebanga ukusuka eMhlabeni kuya enyangeni sidale isibalo esingabalulekile kakhulu nokuthi yini engasitsheli ukuthi siyini. Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungazi kangcono ibanga elikulo isathelayithi yethu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isayensi yezinkanyezi » Ibanga ukusuka eMhlabeni nenyanga